anabata - Free Premium anabata WordPress Gburugburu Downloads
HomeNgwaahịa akpadoro "anabata"
Free Agụụ WordPress Okwu
Free Agụụ WordPress Okwu - Ụlọ oriri na ọṅụṅụ anabata WordPress Okwu
Ọtụtụ isiokwu WordPress iji mepụta ebe nrụọrụ weebụ metụtara nri, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ dị n'ụbọchị ndị a ma ihe ka ọtụtụ n'ime ha enweghị ụfọdụ atụmatụ dị mma dịka nhazi nhazi ma ọ bụ ntinye nhọrọ nke a wụrụ n'ime ya. Ma, "Nri" bụ isiokwu dị mma nke ga-enye gị ebe nrụọrụ weebụ zuru ezu na iji anya na-achọpụta ihe ma jupụta na atụmatụ nke oge a. E nwere plethora nke nhọrọ ndị a na-edozi ngwa ngwa nke na-agbakwunye na nkwekọrịta nke ndị ị chọrọ ịbịa. Iji nye ya aka aka, ị nwere ike ịhazi ya n'oge ọ bụla. Igodo dị mma enyi na nhazi ọ dị ọcha.
Ndị ọkachamara ọkachamara enyela "WordPress" mkpado na-eburu n'uche na onye ọbụla aghaghị icheta ihe omume egwú ha gara. Nke a bụ isiokwu WordPress kachasị nke ị ga - esi wulite ebe nrụọrụ weebụ maka ụlọ abalị gị ma ọ bụ ebe ọ bụla ntụrụndụ ọzọ, ebe a ga - eziga foto. Ọ bụ isiokwu jupụtara na ihe dị ịtụnanya nke nwere ike ọbụna ahaziri onwe gị iji gboo mkpa ọ bụla dị mkpa n'efu. Ọzọkwa, isiokwu a bụkwa ihe magburu onwe ya maka ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ metụtara mgbasa ozi, egwu egwu ma ọ bụ ihe nkiri vinema. A pụghị ịgbakwunye bọtịnụ mgbasa ozi ọha na eze ka ị gbakwunye ọrụ ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị ma rutekwu ndị na-ege ntị.
Egosi 5 pụta